Cusbooneysiinta Toddobaadka ee toddobaadlaha ah: Nidaamyada Dugsiga Portland, Barnaamijka Cusub ee Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Portland, & Feejignaan Guul leh oo loogu talagalay Dhibbanayaasha Naceybka Aasiyaanka Mareykanka ah ee Portland – Boundless MEdia
Cusbooneysiinta Toddobaadka ee toddobaadlaha ah: Nidaamyada Dugsiga Portland, Barnaamijka Cusub ee Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Portland, & Feejignaan Guul leh oo loogu talagalay Dhibbanayaasha Naceybka Aasiyaanka Mareykanka ah ee Portland
By Ridwan Ali & Setareh Jalali, Boundless MEdia
(For English translation click here)
Toddobaadkan barnaamijkeenna wararka, waxaan ku qabaneynaa wax xoogaa ka yara duwan. Martideenii , Ridwaan Cali, ayaa xanuunsanayey toddobaadkan, sidaa darteed waxaan go’aansanay intii aannaan wax war ah soo dhigin, waxaan la wadaagi doonnaa nooc daabacan oo ah wararkeenna toddobaadlaha ah. Ku raaxayso & la soco usbuuca soo socda dhacdo gaar ah oo ay ka soo muuqanayaan xubnaha bulshada!
PORTLAND — Aynu ku bilowno cusbooneysiinta COVID ee manta Maine. Maine CDC ayaa ka warbixineysa 251 kiisaska cusub ee COVID-19 Arbacadii iyo 5 dhimashada cusub.
Mawduuca COVID, Madaxweyne Joe Biden iyo sarkaal sare oo caafimaadka ka tirsan ayaa Isniintii ka digay in dad badan oo Mareykan ah ay dabcinayaan xayiraadaha COVID. Waxay waydiisteen in dawladuhu sii wadaan fulinta shuruudaha maaskarada iyo xaddidaadaha kale si looga hortago mar afraad ee fayraska.
Kiisaska fayrasku waa ilaa 10 boqolkiiba usbuucii la soo dhaafay usbuucii ka horreeyay, illaa 60,000 oo xaaladood maalin kasta, iyadoo isbitaallada la dhigo iyo dhimashooyinka ayaa sidoo kale kor u kacaya. Dr. Rochelle Walensky oo ka tirsan CDC-da qaranka ayaa ka digtay in haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin uu Mareykanku raaci karo waddamada Yurub oo uu ku soo bato xaalad kale oo kiisas ah uuna la kulmo dhimasho aan loo baahnayn.
Walensky wuxuu tilmaamay kor u qaadista safarka iyo dabacsanaanta xaddidaadda fayraska ee kororka kiisaska. Dadku waxay rabaan in sidan lagu dhammeeyo. Aniguba sidoo kale, waxaan rabaa sidoo kale, ayay tiri. “Hadda maahan waqtigii wax laga quusan lahaa,” ayuu yiri Biden. “Hadda ma ahan waqtigii loo dabaal degi lahaa. Waxaa la joogaa waqtigii aan qaban lahayn waxa ugu wanaagsan ee aan dal ahaan u qabanno: waajibaadkayaga, shaqooyinkeenna, aan is daryeelno. ” Marka, tani waa waano saaxiibtinimo aniga iyo Boundless MEdia, oo loogu talagalay xubnaha bulshada ee aan jecel nahay oo aan taageerno: Fadlan sii wad xirashada waji-furka, kala fogaanshaha bulshada, iyo inaad is-tallaasho.
Hada wararka qaar ee ka baxa Portland… Markii ugu horreysay taariikhda, degmo dugsiyeedka Maine waxaa aqoonsaday Ururka Guddiyada Dugsiyada Qaranka iyada oo la siisay Magna Award, taas oo lagu sharfo degmooyinka ku baahsan dalka si loo horumariyo sinnaanta loona jebiyo caqabadaha ardayda aan loo adeegsan. Dugsiga degmada Portland wuxuu ka mid yahay seddex guuleyste ee la siiyay abaalmarinta 2021 iyada oo lagu aqoonsanayo sida ay uga go’an tahay sinnaanta barnaamijkeeda ‘Make It Happen’, oo bilaabmay 14 sano ka hor. “Make It Happen” oo ka caawisa ardayda luqadaha badan ku hadla fasalada 9aad ilaa 12aad, iyaga oo siiya taageero tacliimeed si loo hubiyo inay ku guuleystaan iskuulka kana caawiyaan inay u diyaar garoobaan gelitaanka kuleejka.
Abaalmarinta waxaa ka mid ah $5,000 oo deeq ah oo degmadu u adeegsan doonto inay u aasaasto sanduuqa deeqda waxbarasho ee kuleejka ardayda kaqeybqaadata “make Happen”! iyadoo faahfaahin dheeraad ah la filayo in lagu dhawaaqo guga.
Waxaan u hambalyeynayaa olalaha “Make it Happen” iyo iskuulka degmada Portland. Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka barato iyaga, halkan ka fiiri websaydhka.
Sidoo kale Portland, Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Portland waxay ballaarisay tababbarkeeda shaqo ee loo yaqaan ‘Mainers’ cusub. PAE waxay dhammeysay kal-fadhigii labaad ee Barnaamijkooda Tababbarka Macaamiisha Cusub, oo ah hindise cusub oo loogu talagalay in lagu caawiyo xirfadleyda adeegga maaliyadeed ee tababbaran ee ajaanibta ah inay dib ugu soo noqdaan shaqooyinkooda maaliyadeed ka dib markay u guureen Mareykanka. Fasalka oo socdo 12-usmuuc waa iskaashi u dhexeeya Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Portland iyo sideed bangiyada maxalliga ah iyo ururada amaahda inta lagu gudajiray taas oo ardaydu ay wax ka baran karaan xirfadlayaasha warshadaha ee ku saabsan adeegga macaamiisha, shaqo raadinta, maaliyad shaqsiyeed iyo xirfadaha maaraynta lacagta. 14-kii arday ee ugu horreeyay, 11 ayaa hadda shaqeeya waqti buuxa, iyo siddeed oo ka shaqeeya bangiyada. Hadaad rabto inaad waxbadan kabarato barnaamijyadooda, halkan ka eeg boggooda.
Hadda laba toddobaad ka hor waxaan idiinka warrannay toogashadii Atlanta, Georgia iyo kororka rabshadaha ka dhanka ah Aasiya iyo nacaybka Ameerika. Talaadadii Portland, saddex urur ayaa ku qabtay Payson Park feejignaan si ay u faafiyaan farriinta midnimada ka dib rabshadaha. Feejignaanta ayaa soo uruurisay boqolaal dad ah. Navi Chhay, haweeneyda Aasiya-Ameerikaanka ah oo dhowr toddobaad ka hor ku dhex jirtay gaarigeeda iyada iyo gabadheeda oo ku taal Forest Ave markii nin uu bilaabay inuu dhibaateeyo, waxay u aqrisay bayaanka dadkii isugu yimid wixii ku saabsan khibradeeda. Kuwa kale ee hadlay waxay ka mid ahaayeen xildhibaanka magaalada Tae Chong oo ah Kuuriyaan-Mareykan, iyo sidoo kale dhowr Aasiya Portland Public School oo watay calaamado muujinaya sawirada Aasiya-Mareykankii la dilay ama la weeraray todobaadyadii la soo dhaafay. Arday kasta wuxuu akhriyay muuqaal kooban oo dhibbanaha ah iyo wixii ku dhacay.
Feejignaanta ayaa timid maalmo ka dib Dibadbax Nacayb Aasiya ah oo lagu qabtay banaanka hore ee Portland City Hall Sabtidii. Waxaa soo abaabulay Bulshooyinka Aasiya ee Midaysan, Xarunta Soo-dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland, iyo Dugsiyada Dadweynaha Portland.
Waa hagaag, taasi waxay soo koobeysaa bandhigeena toddobaadkan. Aad baad ugu mahadsantahay soo dhaweyntaada. Toddobaadka soo socda, la soco qayb kale oo la soco wararkaaga toddobaadlaha ah. Haddii aad rabto inaad ila soo xiriirto, waxaan jeclaan lahaa jawaab celintaada, faallooyinkaaga, ama su’aalahaaga. Sidoo kale ii soo sheeg haddii ay jiraan mowduucyo gaar ah oo aad jeceshahay inaan mustaqbalka ka hadlo. Waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram ama Facebook at boundlessMEdia207 ama Twitter at boundlessME207.
Waad mahadsan tihiin waxaanan ku arki doonnaa usbuuca soo socda iyadoo aad fiidiyoow joogto ah soo bandhigi doontaan, laakiin qaar ka mid ah martida gaarka ah ee bulshada… La soco!
previous post: Weekly News Update: Portland School Systems, Portland Adult Education’s New Program, & a Successful Vigil for Asian-American Victims of Hate in Portland
next post: Poor rains bring optimism African locust outbreak will fade